भर्खरै गयो यति ठूलो श’ क्तिशाली भु’ कम्प, पुरै देश डु’ ब्यो शोकमा – Paluwa Khabar
भर्खरै गयो यति ठूलो श’ क्तिशाली भु’ कम्प, पुरै देश डु’ ब्यो शोकमा
साउन १५, २०७८ शुक्रबार 68
अमेरिकाको अलास्का प्रायद्वीपमा बुधवार ८ दशमलव २ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भू’ कम्प गएको छ । भूकम्पपछि हवाईमा सुनामीको चे’ तावनी जारी गरिएको छ ।
होनोलूलू स्टार एडभरटाइजरका अनुसार प्रशान्त सुनाती चेतावनी केन्द्रले ८ दशमलव १ को तिब्रताको झ’ ड्का मापद गरेको छ । सेन्टरका अनुसार अहिले हवाईमा सुनामीको ख’ तरा छ कि छैन भन्ने कुराको प’ रीक्षण भैरहेको छ ।
उता, यूएस जियोलोजिक सर्वेले भूकम्पको मापन ८ दशमलव २ रेक्टर स्केल भएको बताएको छ । भूकम्पको केन्द्र अलास्कामा पेरीभिलबाट ९१ किलोमिटर पूर्व–दक्षिण पूर्व भएको बताइन्छ ।
भूकम्पको केन्द्र समुद्र सहतभन्दा २९ माइल तल भएको बताइन्छ । यूएस जियोलोजिकल सर्भेका अनुसार उक्त क्षेत्रमा आधा घण्टा भित्रमा तीन पटक झ’ ट्का महसूस गरियो । पहिलो ८ दशमलव २ ति’ ब्रताको झ’ ट्का आयो ।
त्यसको आधा घण्टापछि ६ दशमलव २ तथा ५ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको तिब्रता महसूस गरियो । प्रशान्त सुनामी चेतावनी केन्द्रको तर्फबाट के भनिएको छ भने सुनामीको सम्भावित ख’ तराको परीक्षण भैरहेको छ । सामान्यतया समुद्र सतहमा भूकम्प आएपछि सुनामी आउने गरेको छ ।
उक्त सुनामी भूकम्पको केन्द्रभन्दा टाढा तटीक्ष क्षेत्रहरुमा पनि विनाशकारी हुनसक्छ । प्रारम्भिक भूकम्पिय तथ्यांकका अनुसार उक्त भू’ कम्पको केन्द्रको क्षेत्रमा भएका प्राय सबैले व्यापक रुपले भूकम्पको झ’ ट्का महसूस गरेको हुनुपर्छ ।
तपाईँलाई यो पोस्ट कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला ! यो पोस्ट राम्रो लागे अवश्य सेयर गर्नुहोला । धन्यावाद
Prevके विद्यालय खुल्ला होला ? यस्तो भयो सीसीएमसीमा छलफल
Nextको’ रोना सं’ क्रमण बढेपछि पुन यति गतेबाट कडा लकडाउन हुने सरकारको घोषणा
केपी ओलीविरुद्ध यस कारणले आन्दोलन गर्ने प्रदेश सरकारको चेतावनी